EHL presents Defining Hospitality in Yangon Tickets, Mon, 21 May 2018 at 7:00 PM | Eventbrite
EHL presents Defining Hospitality in Yangon
Mon 21 May 2018, 7:00 PM – 9:00 PM Myanmar Time Myanmar (Burma) Time
7:00 PM – 9:00 PM Myanmar Time Myanmar (Burma) Time
Corner of Bogyoke Aung San Road and Shwe Dagon Pagoda Road
Ecole hôtelière de Lausanne would like to invite you to attend an evening with Christophe Laurent and Kan Win Oung hosted by Moe Thin Chay.
Basic tips on wine appreciation
Startingahospitaity business in Myanmar
Speakers: Christophe Laurent & Kan Win Oung
Hosted by Moe Thin Chay
Christophe Laurent is the Values Ambassador at Ecole hôtelière de Lausanne (EHL),aleading Swiss university and oversees the implementation and respect of the values on campus at EHL. Prior to joining EHL, he held operational and managerial responsibilities in top restaurants and hotels in the UK. In 1991, he was awarded the title of MOGB (Meilleur Ouvrier de Grande Bretagne) Arts de la Table by the French Academy of Culinary Arts. With his domain of expertise in customer care management and international business etiquette, he travels locally and around the globe to share his experiences with university students and key players in the world of hospitality.
Kan Win Oung is now spearheadingaprominent heritage project named The Secretariat as the Group General Manager. He started his career in the hospitality industry asaButler inafive star hotel, The Strand, from Yangon in 1997. He then moved on to working onboard the luxury river ship “Road to Mandalay”, which isasister company of VSOE Express and E&O Express. After studying at Ecole hôtelière de Lausanne, he had an opportunity to work at the Sofitel Miami, Florida. Kan later returned to Myanmar and was the Food and Beverage Manager inaresort hotel in the ancient city “Bagan” and was offered the position of Executive Assistant Manager foraresort hotel on Ngwe Saung beach in 2007. In this capacity, he pioneered the opening of Bay of Bengal and was directly responsible for daily operations, strategic planning, recruitment and training of hotel staff. In 2012, he returned back to his home country Myanmar and worked asabusiness consultant chiefly in hospitality related fields, and wasaCEO ofahospitality training school in Yangon.
Moe Thin Chay
Moe Thin Chay is the Founder and CEO of Zawgyi Star Foundation, engaging in wildlife conservation and community development in Myanmar. Recently graduated from Ecole hôtelière de Lausanne, she was awarded the Young Hotelier Summit Challenge Winner in 2016 during her studies. Prior to joining EHL, she was the Tourism Ambassador of Myanmar in 2012, and worked with the Union of Myanmar Travel Association. With her expertise in hospitality management and passion for conservation and community engagement, she works closely together with locals, as well as international foundations on projects such as Aung Ban Luxury Housing Project, Myanmar Primate Gibbon Conservation and Pa-Oh Community development in Shan State.
This event is the first installment of the Defining Hospitality series in Myanmar, and will be attended by industry professionals, entrepreneurs, business owners, hospitality students, and anybody else who may be interested. Our speakers will share their views on the world of hospitality. Defining Hospitality isaseries of panel discussions we launched in Singapore in 2017. We’ve held four such discussions so far, with the topics of concept design, corporate culture, customer loyalty and food & beverage.
ဒေါ်မိုးသင်္ချေ မှ အိမ်ရှင်အဖြစ် လက်ခံကျင်းပသော Christophe Laurent နှင့် ဦးခန်းဝင်းဦး တို့၏ပူးပေါင်းပါဝင်မှုဖြင့် Defining Hospitality in Yangon ပွဲကို EHLမှလေးစားစွာ ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။
ယခုပွဲသည် Defining Hospitality series ၏ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပထမဆုံး ပွဲဦးထွက်တင်ဆက်သည့်ပွဲဖြစ်ပြီး သမရိုးကျစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အသိပညာပံ့ပိုးခြင်းဖြင့် အဆင့်အတန်းမြငိ့သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဖြစ်သို့မြင့်တင်လိုသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၊ စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်များ၊ hospitality management ကိုစိတ်ဝင်စားသူများအားလုံးနှင့် သက်ဆိုင်ပါသည်။ ယခုပွဲတွင် ဟောပြောမည့်သူများသည် hospitality ကမ္ဘာကြီးရှိ ၎င်းတို့အမြင်များကို ဝေမျှမှာဖြစ်ပါသည်။ Defining Hospitality series သည် Singapore တွင် ၂၀၁၇မှစတင် တင်ဆက်သော panel ဆွေးနွေးပွဲဖြစ်ပါသည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ အယူအဆဒီဇိုင်းများ၊ Corporate ယဉ်ကျေးမှု၊ စားသုံးသူ သစ္စာရှိမှုနှင့် Food and Beverage ပိုင်းဆိုင်ရာများနှင့် ပက်သက်၍ ဆွေးနွေးပွဲ ၄ခုကို တင်ဆက်ပြီးဖြစ်ပါသည်။
- အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ စီးပွားရေးကျင့်ဝတ်
- အခြေခံ ဝိုင်ယဉ်ကျေးမှု
- မြန်မာနိုင်ငံတွင် Hospitality ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများစတင်ခြင်း
ဟောပြောသူ - Christophe Laurent နှင့် ဦးခန်းဝင်းဦး
တင်ဆက်သူ - ဒေါ်မိုးသင်္ချေ
နေ့ရက် - တင်္နလာနေ့၊ ၂၁ မေလ၊ ၂၀၁၈
အချိန် - ညနေ ၇နာရီမှ ၉နာရီ
နေရာ - အတည်ပြုရန်လိုသေး
Ecole hôtelière de Lausanne (EHL) သည် အစဉ်အလာကောင်းသည့် Swiss hospitality မှဆင်းသက်လာ၍ hospitality ပညာရေးကို ၁၈၉၃ခုနှစ်ကတည်းက ရှေ့ဆောင်နေသောကျောင်းဖြစ်ပါသည်။ EHL သည် ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး hospitality ကျောင်းအဖြစ် အမြဲတမ်းသတ်မှတ်ခံရပြီး လုပ်ငန်းခွင် တွင် ဘွဲ့ရရပြီးချင်း အလုပ်ဝင်ခွင့်ရှိမှု အမြင့်ဆုံးကျောင်းလဲဖြစ်ပါသည်။ EHL ၏ ပထမဆုံး ပြည်ပရုံးခွဲသည် Singapore တွင် တည်ရှိပါသည်။ Singapore ရုံးခွဲသည် EHL ၏ အာရှပစိဖစ်ဒေသတွင် ဈေးကွက်ရှာဖွေရေး၊ ဆက်သွယ်ရေး၊ ကျောင်းဝင်ခွင့်များ၊ ကျောင်းသားဟောင်းများနှင့် အဆက်အသွယ်တည်ဆောက်မှုများကို လုပ်ဆောင်ပါသည်။
Christophe Laurent သည် EHL ၏ Value Ambassador ဖြစ်ပါသည်။ Ecole hôtelière Lausanne တွင် EHL ၏ တန်ဖိုးအကောင်အထည်ဖော်မှုနှင့် စည်းမျဉ်း လေးစားလိုက်နှာမှုကို တာဝန်ရှိသူဖြစ်ပါသည်။ EHL မတိုင်မှီ Christophe Laurent သည် UK နိုင်ငံရှိ ထိတ်တန်းစားသောက်ဆိုင်များတွင် စီမှံခံ့ခွဲမှုနှင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု ပိုင်းဆိုင်ရာများတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ၁၉၉၁ခုနှစ်တွင် သူသည် French Academy of Culinary Arts မှကျင်းပသည့် Arts de la Table ပြိုင်ပွဲတွင် MOGB (Meillur Ouvrier de Grande Bretagne) ဆုကို စွတ်ခူးရရှိခဲ့သည်။ သူ၏ customer ပိုင်းဆိုင်ရာ ဂရုစိုက်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ စီးပွားရေး ကျင့်ဝတ်ကျွမ်းကျင်မှုများဖြင့် Christophe Laurent သည် ပြည်တွင်းပြည်ပများသို့ ခရီးသွားကာ တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားကျောင်းသူများ၊ hospitality ကမ္ဘာ၏ အရေးကြီးပုက္ကိုလ်များဖြင့် အတွေ့အကြုံဖလှယ်နေသူတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။
ဦးခန်းဝင်းဦးသည် မြန်မာ့အမွေအနှစ်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေး စီမံကိန်းဖြစ်သည့် The Secretariat တွင် Group General Manager ဖြစ်သည်။ သူသည် ၁၉၉၇ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန်ရှိ five star hotel, The Stand တွင် Butler အဖြစ် hospitality လုပ်ငန်းကို စတင်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် VSOE Express and E&O Express ၏ ကုမ္ပနီခွဲဖြစ်သည့် ဇိမ်ခံသဘောင်္ Road to Mandalay တွင် အလုပ်လုပ်ခဲ့သည်။ EHL မှဘွဲ့ရပြီးနောက် Sofitel Miami, Florida တွင် အလုပ်လုပ်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် သူသည် မြန်မာနိုင်ငံသို့ပြန်လာပြီး ပုဂံမြို့ရှိ Resort ဟိုတယ်တွင် F & B Manager အဖြစ်၊ ငွေဆောင်ရှိ Resort ဟိုတယ်တွင် ၂၀၀၇ ခုနှစ်က Executive Assistant Manager အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ထိုကာလအတွင်း သူသည် Bay of Bengal ၏ နေ့စဉ်လုပ်ငန်းစီစစ်မှုများ၊ ဗျူဟာစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း၊ ဝန်ထမ်းရွေးချယ်လေ့ကျင့်မှုများပြုလုပ်ပေးချင်းဖြင့် BOB ဟိုတယ်စတင်ဖွင့်လှစ်မှုကို ဦးဆောင်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၂ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံပြန်ရောက်ချိန်တွင် သူသည် ရန်ကုန် hospitality လေ့ကျင့်ရေးကျောင်းတွင် business consultant အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။
ဒေါ်မိုးသင်္ချေသည် Zawgyi Star Foundation ၏ Founder နှင့် CEO ဖြစ်သည်။ မြန်မာ့တောရိုင်းသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးနှင့် ရပ်ရွာဖွံ့ ဖြိုးရေး အတွက်ဆောင်ရွက်နေသော Foundation ဖြစ်သည်။ သူသည် ၂၀၁၈ ဖေဖော်ဝါရီမှ EHL မှဘွဲ့ရခဲ့ပြီး ၂၀၁၆ ပညာသင်ကြားနေစဉ် Young Hotelier Summit ၏ Challenge Winner ဆုကိုဆွတ်ခူးရရှိခဲ့သည်။ EHL ကျောင်းမတက်မှီ ၂၀၁၂ခုနှစ်တွင် Myanmar Tourism Ambassador အဖြစ်ခန့်အပ်ခံရပြီး Union of Myanmar Travel Association နှင့် ပူးတွဲအလုပ်လုပ်ခဲ့သည်။ သူ၏ hospitality ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲမှုကျွမ်းကျင်ခြင်းနှင့် တောရိုင်းသဘာဝထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှု၊ ရပ်ရွာဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်မှုများတွင် စိတ်အားထက်သန်မှုကို ပေါင်းစည်းကာ အောင်ပန်းဇိမ်ခံအိမ်ရာစီမံကိန်:၊ မြန်မာ့ရှားပါးမျောက်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေး နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်ပအိုဝ့်ဒေသဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံကိန်းများတွင် ဒေသခံနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့်ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နေသူတစ်ဦးဖြစ်သည်။
EHL presents Defining Hospitality in Yangon at Pan Pacific Yangon
Corner of Bogyoke Aung San Road and Shwe Dagon Pagoda Road, Yangon, Myanmar, Myanmar
BecomingaTech Entrepreneur | Road to Success asaTech CEO
Strategy First Institute, ရနျကုနျ
US$42.99 - US$105.09
DON’T LET DADDY KNOW MYANMAR - 30 NOV 2018
Strategy First - U Wisara Campus, Yangon